Atlas Copcoconsolidates Chinese migodhi akavhiyiwa - China Tianjin Longtop Mining
Kambani akati Kutama kuchawedzera kunyatsoshanda uye kusimbisa boka yeramangwana.
Atlas Copco uchaisa Zvivako yaro muna Shenyang, iyo manufactures kazhinji ruoko-akabata dombo drills kuti migodhi uye kuvaka, kutama akavhiyiwa kuti chirimwa muna Zhangjiakou. In Shenyang, vanhu vanenge 225 zvichashaya.
In Zhangjiakou, Atlas Copco parizvino pave pasi-pasi-buri midziyo yaishandiswa vanochera blastholes, matsime emvura uye geothermal simba zvikumbiro. In nzvimbo iyi, vashandi vanenge 45 zvichawedzerwa uye upfumi vakaitwa chivako kuwedzera uye michina itsva.
"Tine guru chigadzirwa Portfolio muna China, asi pamwe simba kudiwa pamusika yemigodhi tinofanira nechokwadi kuti isu kushandisa kukwanisa kupfuura basa nzira," akadaro Johan Halling, purezidhendi nokuti Mining uye Rock Excavation Technique mubhizimisi nharaunda.
"Consolidating kushanda kuchatibatsira kuramba takasimba mune ramangwana. Tichakurukura vanotsigira sei vashandi mumamiriro ezvinhu akaoma. "
Both akavhiyiwa achinyanya kushumira wechipfuwo Chinese kumusika.